कथा-अन्तिम मान्छेको डायरी - HongKong Khabar
कथा-अन्तिम मान्छेको डायरी
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २२, २०७८ समय: ९:२७:४०
मणि भट्टराई –
पचास बर्ष अघि यस संसारका सम्पूर्ण महिलाहरूले बच्चा नपाउने निर्णय गरेका थिए । सुरू सुरूमा अपत्यारिलो लागे पनि यो कुराले मूर्त रूप लिएर छोड्यो । आज पचासौं बर्षको अबसरमा यस धर्तीमा बचेका महिलाले यो धर्तीबाट चाँडै मानव अस्तित्वको अन्त्य हुन गइरहेकोमा खुसीले एक साथ ताली पड्काए । त्यहाँ उपस्थित केही पुरूषहरूले पनि साथ दिएर ताली पिटे, तर अधिकाँस पुरूषहरूको अनुहार भने अझै मलीन देखिन्थ्यो । महिलाहरूको यो अभियानमा संसारका करोडौं पुरूषहरूले पनि साथ दिएका थिए ।
संसारले भौतिकताको चरम रूप लिंदै गएपछि संसार भर विभिन्न नाममा युद्दहरू हुन थाले । जसरी हुन्छ भौतिक सम्पन्नता हाँसिल गर्ने भूत मान्छेहरूमा नराम्रोसँग विकसित भएर गएको थियो । धर्म भन्ने कुरा पनि सिर्फ देखावटी थियो। यही भएर कुनै पनि कुरामा मान्छेमा विश्वास हुन छोड्दै गएको थियो । । सबै क्षेत्रमा एक मात्र बादशाह भनेको व्यपार थियो । हत्या हिंसा र आतंकले संसारको कुनै ठाऊँ अछुत रहन सकेन । जातका नाममा, धर्मका नाममा, रंगका नाममा, राष्ट्रियताका नाममा, मजदुर र मालिकका नाममा संसारभर हिंसा भड्किएको थियो । कहाँ मान्छे कति मरे भन्ने कुनै राष्ट्रसँग केही तथ्यांक थिएन । संसारमा त्यस्तो कुनै घर थिएन होला जुन युद्दको चपेटामा नपरेको होस् ।
हिंसाको सबैभन्दा दर्दनाक रूप नारीहरूले व्यहोर्नु परेको थियो । पुरूषहरू स्वभाविक रूपमा मारिन्थे, मर्थे, सके आफू मार्थे । तर नारीहरू भने अधिकाँस वलत्कृत भएर मर्नु पर्थ्यो । कतिलाई मारिसकेपछि पनि बलत्कार गरेर छोड्थे । जहाँ आँखा खोले पनि उस्तै विभत्स दृष्यहरू खडा हुन्थे । कुनै पनि आमाका कुरा कुनै सन्तानले सुनेका थिएनन् । संसार मृत्युउत्सब भएर भौतिक होडबाजीमा अघि बढिरहेको थियो । खै! कसरी हो कुन्नि ! यहि बेला एकै समय संसारभरका नारीहरूमा एउटै सोच एकाएक आएको थियो ।यहिबेला उनिहरूले यो दर्दनाक विश्वको निरन्तरता रोक्ने कठोर निर्णय एकसाथ गरेका थिए । यो निर्णयसँगै संसारमा एकाएक हिंसा घट्दै गयो । तर नारीहरूले आफ्नो निर्णय बदलेनन् । र यो त्यही निर्णायकों पचासौ दिनको अबसर थियो ।
धर्तीमा पचास बर्ष मुनिका मानिसहरू कतै थिएनन् । र म ठीक पचास बर्षको मान्छे, यो धर्तीको अन्तिम र सबैभन्दा कान्छो पुस्ता पनि त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ । म चुपचाप थिएँ । मेरा आवाजहरू मैसँग बुढा भइरहेका थिए । मेरो भाषा मैभित्र मरिरहेको थियो । मेरो कला, मेरो संस्कृति, मेरो जात, मेरो धर्म, मेरो रंग, मेरो भूगोल सबै सबै यो सृष्टिको अनन्ततामा विलय हुँदै गइरहेका थिए । मलाई आफू कुनै खाल्डोमा पुरिंदै गइरहेको जस्तो लागिरहेको थियो । मेरो भारी विसाउने पुस्ता मसँग थिएन । म कहिं गइरहेको थिएँ, मलाई पछ्याउनेहरू मेरो पछि कोही पनि थिएन । अगाडि जानको लागि अझै थोरै जीवन बाँकि थियो, पछाडि केही थिएन, खालि निरन्तर एउटा सन्नाटाले लखेटिरहेको थियो ।
पुरूषहरूको तुलनामा महिलाहरूको सँख्या अत्यान्तै न्युन थियो । र जति बाँचेका थिए तिनीहरूमा पनि कसैसँग प्रजनन क्षमता बँचेको थिएन । यस बीचमा मध्यपूर्वका कुनै पनि महिलाहरू जीवित थिएनन् । ती सबै पुरूषहरूको क्रोधले सुरूमै खरानी भएर गए। महिलाहरूले बच्चा नपाउने निर्णय गर्दा सबैभन्दा आक्रोसमा मध्यपूर्वका पुरूषहरू देखिएका थिए । सुरूसुरूमा तिनीहरूले नारीहरूलाई मनाउने प्रयत्नहरू गरे पनि ती असफल भए । अन्तत: नारीहरूको विभत्स हत्या सुरू भयो । पुरै संसार नारीहरूको रगतले भिज्यो । धेरै देशका सरकारहरूले १५ बर्ष देखि ४९ बर्ष ननाघेका महिलाहरूलाई पक्राउ गर्दै महिला शिविर निर्माण गरेर जबर्जस्ती गर्भधारण गराउने प्रयत्न गरे तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । यस सिलसिलामा संसारमा लाखौ महिलाहरूले आत्महत्या गरेका थिए ।
संसार अनौठो विश्वमा प्रवेश गरिरहेको थियो । चीनसँग अमेरिका त्रसित थिएन । न त नेपाल र भारतको सीमा विबाद कायमै थियो । उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्र परिक्षण गरिरहेको पनि थिएन । देशका सिमारेखाहरू लगभग मेटिएका थिए । पहिलेको जस्तो मान्छे मान्छे बीचको आतंकको ठाऊँ मान्छे विनाको सन्नाटाले ओगट्दै लगिरहेको थियो । सबै आ-आफ्नो मृत्यु कुरेर जीवन बाँचिरहेका थिए । कति त डिप्रेशनले आत्माहत्या गरिरहेका थिए । मान्छेहरूका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो हरेकलाई मर्नको हतार छ ।
मान्छे भेटिनु नै ठूलो कुरा बन्दै गएपछि जात, धर्म र रंग भन्ने कुरा मान्छेले संझने कुरै थिएन । अलिअलि गर्दै मान्छेहरू समुन्द्रको छेऊछाऊतिर सर्दै गइरहेका थिए। खेतिपाती गरेर खान सक्ने अबस्था नाज़ुक बन्दै गइरहेको थियो । कति देशमा मान्छे नै थिएनन् ।संसारका अधिकाँस सहरहरू मानवरहीत थिए । खाली घरले बुढाबुढीहरूलाई तर्साईरहेको थियो । जंगली जनवारहरू बढेर मान्छेहरूलाई आक्रमण गर्न थालेका थिए । कति मान्छेहरू यसरी नै मरे । खेति गर्न सक्ने उपाए नभए पछि बँचेकाहरूको आहारा भनेको सकेसम्म तिनै जंगली जनवारहरूको सिकार गरेर खानु, नसके मर्नु या तीनै जनवारहरूबाट मारिनु थियो ।
आज पृथ्वीको अन्तिम बँचेको मान्छे म – यो कहानी लेख्दै छु । तर यो पढ्ने मान्छे अब यो संसारमा कोही पनि छैन । मैले यो डायरी च्याते पनि नच्याते पनि यसको कुनै अर्थ छैन । मैले यो लेख्नुको नै पनि कुनै अर्थ छैन । न त मेरो विगत मसँग छ, न त वर्तमान, न त भविष्य ?
एकाएक मलाई मेरो टाउको गह्रौ भए जस्तो लाग्यो। म हिंड्न पनि नसक्ने बुढो मान्छे | यहि शरिर नै मलाई भारी भएको छ । अब के गर्ने होला ! यो प्राणको अन्त्य कुर्नु शिवाय अरू क्षमता शरीरमा शून्य छ । यो सोच्नु पनि के सोच्नु ? सोचेर पनि के गर्नु ? नसोचेर पनि के गर्नु ? म शून्य, शून्यमा विलीन भइरहेछु.. । ऊ त्यो माथिबाट लडेर आएको ढुँगो मेरो ..मेरो समाप्तिको अन्तिम कारण हुन सक्छ । यो मेरो आफ्नो भोक नै पनि मेरो समाप्ति हुन सक्छ । जतिखेर पनि कुनै हिंस्रक जंगली जनवारको आहारा पनि हुन सक्छु म । हुन त ‘संसारबाट अस्तित्व लोप भइसकेको म मान्छे नामको प्राणी यस धर्तीको निम्ति कति मूल्यवान टुक्रा हुँला ? यस धर्तीका अरू जुनसुकै प्राणीको निम्ति म कति अनौठो देखिंदो हूँ ?’ केही क्षणको निम्ति खुसी भए जस्तो सानो मूल्यबोध भयो मलाई, मेरो आफ्नै । तर त्यसको पनि के अर्थ अब ? मेरो मुटु अचानक यस्तै अन्त्यको त्रासले त्रसित भएर सदाको निम्ति रोकियो । अर्थात् आज यो धर्तीको अन्तिम मान्छेको पनि अन्त्य भएको छ, वा म अन्तिम मान्छे पनि यो सब कहानी सहितको डायरी छातीमा राखेर सदालाई निदाएको छु ।